Sahirana amin'ny Noobs ve ianao? | Martech Zone
Alakamisy, May 22, 2008 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Iray amin'ireo tombony (heverin'ny sasany ho fanozonana) ny fiankinan-doha ara-teknika, er… savvy, dia ny olona rehetra mangataka fanampiana aminao foana. Namako akaiky sy namako Hoosier, Patric aka Andriamatoa Noobie, vonona tanteraka hanaisotra ity enta-mavesatra ity eo an-tsorokao! Patric dia nanana tranokala mitombo, Noobie, tao anatin'ny herintaona fa vao haingana nohavaozina ny lamina sy ny fandefasana dia tsy mampino!
Noobie, Inc. dia manana podcast, rakipeo ary rakipeo, lahatsoratra ary hetsika mihitsy aza. Manontany tena foana hoe inona ny ny fahasamihafana misy eo amin'ny iPhone sy iPod Touch ireo? Noobie, Inc. manana ny valiny!
Taona maro lasa izay dia nanana tranokala antsoina hoe "Tanana fanampiana" aho izay amidiko amina sombi-panovana kely. Natsipin'izy ireo ny zoro teknolojia ary nanjary tranonkala hanampy anao hiala amin'ny sigara izy io. Noobie, Inc. no antenaiko hahatongavan'i Helping Hand. Miarahaba an'i Patric!
Alohan'ny handaozanao ity lahatsoratra ity dia aza hadino ny mandefa mailaka amin'ireo ray aman-dreninao, rahalahinao, rahavavinao ary mpiara-miasa aminao Noobie, Inc.. Azonao atao ihany koa ny misoratra anarana amin'ny Inona no bilaogy Noo!
Avelao i Patric hikarakara ireo vao teraka amin'ny fiainanao!
Tags: loharanom-baovao infografikaFivarotana finday sy tablettefandefasana hafatra azo antokasamy mikarakara ny tenanyvirtoaly mpanampyserivisy ho an'ny tranonkala
May 23, 2008 ao amin'ny 3: 35 PM
Torohevitra tsara momba ny tranonkala, misaotra.
Hizara izany amin'ny mpijery ahy aho.
May 23, 2008 ao amin'ny 3: 43 PM
Misaotra amin'ny fanovozan-kevitra lehibe. Ity dia tranokala tsara ho an'ny olona rehetra satria misy ny haitao vaovao foana midina amin'ny paikady ilaintsika fanampiana amin'ny fianarana.